Jery todika taona 2015 : fampihavanam-pirenena… nampisara-bazana ara-politika | NewsMada
Mby aiza ny fampihavanam-pirenena natomboky ny FFKM? Niteraka fisaraham-bazana politika ny fehinkevitra na sosokevitra…
Taorian’ny fampihaonana ireo filoha efa-tonta sy ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, nanomboka ny 19 desambra 2014, mitohy ny asa fampihavanan’ny FFKM. Nisy, ohatra, ny fihaonana ny 13 sy 15 ary 16 janoary 2015. Na izany aza, teo ny fisintahan’ny filoha teo aloha, Zafy Albert, ary ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Rajoelina Andry.
Nambaran’ny filohan’ny FFKM teny Mahamasina, ny 20 febroary, fa hiala nenina hampody azy ireo ny fiangonana. Tsy ifanerena ny fampihavanana. Ny zava-dehibe: ny vahoaka 22 tapitrisa, fa tsy ireo filoha dimy.
Vita ny 5-7 marsa ny fakan-kevitra isam-paritra amin’ny asa fampihavanana, namalian’ny mpizaika fanontaniana 15. Nisy vaomiera telo tamin’izany: fifamelana sy fampihavanana, fanarenana sy fanonerana ireo tra-pahavoazana tamin’ny krizy, fanarenana ny firenena.
Nampisy savorovoro politika ny fehinkevitra na sosokevitra
Natao teny amin’ny CCI, Ivato, ny 28 avrily ka hatramin’ny 2 mey, ny fihaonambem-pirenena. Nisongadina tamin’izany, ohatra, ny fanapahan-kevitry ny filoha Rajaonarimampianina hanafaka tanteraka ny filoha teo aloha, Ravalomanana: tsy misy intsony ny fitanana na fanaraha-maso azy manokana.
Nahabe resaka indrindra tamin’ny fehinkevitry ny mpizaika ny hoe: “Ravana ny andrimpanjakana rehetra, afa-tsy ny filoham-pirenena, ary haorina ny rafitra vaovao.” Velona ny ady saritaka politika: fiarovan-tseza, fitadiavan-tseza. Voalaza fa tompon’ny teny farany ny filohan’ny Repoblika, ary hisy komity hatsangana handinika izay fomba hanatanterahana ny fehinkevitra sy hanara-maso ny fanatanterahana.
Nanao sonia ny fehinkevitry ny fampihavanam-pirenena ny filoham-piangonana efatra eo anivon’ny FFKM, niaraka tamin’ireo filoham-pirenena nandray anjara tamin’ny fihaonambe: ny filoha Rajaonarimampianina; ny filoha teo aloha isany Ratsiraka Didier sy Ravalomanana Marc. Nambaran’ny filohan’ny FFKM tamin’izany, ny pasitera Rasendrahasina Lala, fa volavolan-kevitra sy sosokevitra ny fehinkevitra vita sonia: tsy hoe fanapahan-kevitra tsy maintsy tanterahina. Saingy tsy nijanona teo ny raharaha…